Emirates Fleet A380 3 afọ 1 izu gara aga #761
Hi, m na-agbalị ịgbakwunye imeju na ngwugwu Emirates Fleet na A380, mana imeju adịghị egosi ma ọ bụ VC anaghị arụ ọrụ, ihe m na-emejọ, ị nwere ike inyere m aka ..
Emirates Fleet A380 3 afọ 1 izu gara aga #762
Otu ihe mere m. Ọ nwere ihe jikọrọ ya na nsụgharị ya, mee ka ị mara na e nwere mbipụta abụọ 841 na 861, otu nke nwere RR na ndị ọzọ na EA GP2700 engines, yabụ ị ghaghị ịgha ụgha na ya, ị ga-eme ka ụgbọelu ahụ chee na ọhụụ ọ bụla ị wụnye bụ ihe ziri ezi. Naanị jiri koodu nke Emirates akpụkpọ ahụ, ịgbakwunye agbụrụ ndị ọzọ. O kwesịrị ịrụ ọrụ.
Emirates Fleet A380 3 afọ 1 izu gara aga #763
Enwere m ekele nke ukwuu, na arụ ọrụ, amalitere m ịpụ ntutu m na mbọ iji nweta nke a iji rụọ ọrụ
kelee m ọzọ
Emirates Fleet A380 2 afọ 11 ọnwa gara aga #780
gbalịa ma nata ya